Dalalka G7 Oo ka hadlay Xaalada Doorashada Soomaaliya – XAMAR POST
Akhriso: Taariikh nololeedkii AUN Sheekh Aadan Cali Xasan oo saakay lagu aasay degmada Kaxda
DEG DEG: Cabdulaahi Sh. Ismaaciil Fartaag oo dib loo doortay
Koox hubeysan oo xalay dil iyo dhaawac ka geystay Ceelwaaq.
Madaxweyne Farmaajo oo dalacsiiyay Saraakiil
Ilyaas Badal Gaboose oo noqday xildhibaankii ugu horeeyay ee maanta lagu doortay Kismaayo
Madaxweynaha K/Galbeed Soomaaliya oo dalka dib ugu soo laabtay.
Guddiga Xalinta Khilaafaadka Doorashooyinka Soomaaliya oo gaaray Kismaayo +Sawirro
Akhriso: Taariikh nololeedkii AUN Sheekh Aadan Cali Xasan oo saakay lagu aasay…
Dalalka G7 Oo ka hadlay Xaalada Doorashada Soomaaliya
By Mohamed Abdi Last updated May 6, 2021
Wasiiradda Horumarinta iyo Arrimaha Dibadda ee Waddamada ku hormaray Warshadaha ee loo yaqaano G7 ayaa sheegay inay si aad ah ugu walaacsanyihiin jahaweeerka siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya, isku dhacyadii rabshadaha watay ee u dhexeeyay dowladda iyo xooggaga mucaaradka iyo musiibooyinkii bini’aadanimo ee ka dhashay rabshadahaas.
Dowladaha G7 ayaa sheegay inay sidoo kale ka xumaadeen go’aankii lagu kordhiyay muddada Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo, taasoo ay ku sheegeen inay u arkayeen inaysan xal u aheyn geeddi socodka doorashooyinka, isla markaana ay wiiqeysay kalsoonida, nabadda, mustaqbalka dadka iyo horumarka hay’adaha dowliga ah.
“Waxaan soo dhaweyneynaa ansixintii Baarlamaanka ee 1-dii Bishaan May ee aheyd db u billaabista wadahadallada u dhexeeya dowladda Federalka iyo madaxda maamul goboleedyada, kuwaas oo ujeedkoodu yahay in la dhameystiro hannaanka doorashada ee ku saleysan heshiiskii 17-kii September” ayaa lagu yiri bayaan Arbacadii ka soo baxay shirkii waddamada G7 ee ka dhacay London.
“Waxaan hoosta ka xarriiqeynaa in aynaan taageeri doonin geeddi-socod babar-socod ah, mid aan loo dhamayn, ama dadaallo cusub oo horseedaya kordhinta muddo xileedkii hore. Waxaan ku boorinaynaa dhamaan madaxda Soomaaliyeed inay aad isu xakameeyaan oo ay ka fogaadaan ficil kasta oo hal dhinac ah, kaas oo sababi kara in xiisadaha siyaasadeed ay kasii daraan, waana muhiim in dhammaan dhinacyadu ay ilaaliyaan amniga iyo xasilloonida Soomaaliya” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkan.
Bayaankan ayaa ugu baaqay madaxda Soomaalida inay si degdeg ah ugu laabtaan wadahadallada doorashada, isla markaana ay galaan dood wax ku ool ah, ayna raadiyaan xal wax tar leh oo horseedi kara heshiis guud oo laga gaaro arrimaha harsan.
“Haddii ayna taasi dhicin, waxay horseedi doontaa in bulshada caalamku wax ka bedesho qaabka ay u wajaheyso Soomaaliya” ayaa lagu soo gaba-gabeeyay warmurtiyeedka ka soo baxay shirkii Wasiiradda Arrimaha Dibada ee dalalka ku bahoobay G7, kaas oo Chinach kale soo dhaweysay Egayga Gaarka ah ee Golaha Nabadda iyo Amniga ee Midowga Africa, iyagoo sheegay inay taagerayaan dadaallada xal u helista arrimaha Soomaaliya.
Ururka G7 ee awoodda warshadaha iyo dhaqaalaha ayaa ka kooban dalalka Canada, France, Germany, Italy, Japan, Ingiriiska iyo Mareykanka.
Tagsiile Soomaali ah Oo Lagu Dilay Dalka Mareykanka
Siciid Deni oo la kulmay wafdi ka socday Qaramada Midoobeey
Mohamed Abdi Jul 29, 2021
Ilyaas Badal Gaboose oo noqday xildhibaankii ugu horeeyay ee maanta…
Guddiga Xalinta Khilaafaadka Doorashooyinka Soomaaliya oo gaaray…
Ra’iisul Wasaaraha Rooble iyo wefdigii uu hoggaaminayay oo soo gaaray…
DEG DEG. Madaxweynaha Jubbaland ayaa soo gudbiyey liiska qaar kamid ah musharixiinta…
Ciidamada xoogga iyo daraawiishta Galmudug oo maanta dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wado…
Ramlo Cali oo looga adkaaday tartanka feerka ee ka socday…
Itoobiya Airlines oo isticmaaleysa garoonka diyaaradaha…